မထူးဇတ်ခင်းနေတဲ့ မအလ နဲ့ D Day မှ အပ အခြား ရွေးစရာ လမ်းမရှိတော့တဲ့ ပြည်သူ.. - Han Nyein Oo
မထူးဇတ်ခင်းနေတဲ့ မအလ နဲ့ D Day မှ အပ အခြား ရွေးစရာ လမ်းမရှိတော့တဲ့ ပြည်သူ..
မအလ အဆငျ့အနထေားက ကွိုးစငျနျော ရှောငျလှဲလို့မရတော့ဘူး ဘယျလိုနညျးနဲ့မှလညျး ကွအေေး ညှိနှိုငျးလို့မရတော့ဘူး ဂိတျဆုံးနပွေီ
ဒီတော့ ယခုလို‌တှဖွေဈနလေို့မြား မအလ မအုပျခြုပျနိုငျရငျ မလုပျနိုငျရငျ ဆငျးတော့ သှားတော့ ဘာညာနဲ့ လုပျမရဘူး
အကွောငျးက သူဆငျးရငျ သူသမှော (သဒေဏျ) ဒီတော့ အဆငျးကိုမခံသလို ဘယျတော့မှ နရောဖယျပေးမှာမဟုတျတော့ဘူး အကယျ၍ ဆငျးခဲ့လညျး အဲ့နပွေ့ေးတဲ့နပေဲ့ စဈတပျကို အခွားသူထဲ ထိုးထညျ့ပွီး ဆကျလကျြ အာဏာယူထားကွအုံးမှာ ဒါမှ သူပွေးလို့ရပွီး အဖမျးမခံ မသမှော
ဒီတော့ စဈတပျမှာ မအလမရှိလညျး ဘာမှဖွဈမသှားဘူး သူက သဒေဏျကခြံနရေတဲ့သူ အမှုပေါငျး သိနျးခြီနဲ့ လညျပငျးကွိုးကှငျးစှပျခံနရေသူ ဒီတော့ သိထားရမှာက ခုမအလနဲ့ စဈတပျတတပျလုံးကို အမွဈပွတျ ရှငျးလငျးနိုငျမှ အရေးတျောပုံက အောငျမွငျမှာ‌ဆိုတော့
ပွညျသူ့ရနျသူသညျ စဈတပျဖွဈသညျ စဈတပျမှ အာဏာလု အာဏာရူး ဗိုလျခြုပိတှဖွေဈသညျ ဒီတော့ စဈတပျမှာ မအလမရှိလညျး ဆကျလကျြ တှနျးလှနျ တိုကျပှဲဝငျပွီး စဈတပျကို အမွဈပွတျရှငျးလငျးရေးနဲ့ အသဈပွနျဖှဲ့စညျးမှ ရမညျ
အကယျ၍ မအလ ဆငျး၍ သို့ သေ၍ ကနျြစဈတပျက ဗိုလျခြုပျတှေ လကျနကျခပြွီး ‌အပွဈဝနျခံ တာဝနျခံမယျဆိုပွီး အာဏာပွနျအပျရငျတော့ ဥပဒအေရလုပျဆောငျပွီး စဈတပျကိုတနျးလြားပို့ အသဈပွနျဖှဲ့စညျးပွီး အစိုးရအောကျထားရမညျဖွဈသညျ
ထိုသို့မှ မဟုတျပဲ ပခေံပွီး အာဏာဆကျလု စဈရေးနဲ့ ခံခြ မထူးဇာတျခငျး ထှကျပေါကျရှာမညျဆိုရငျတော့လညျး ပွညျသူဟာ D Day မှ အပ အခွား ရှေးစရာ လမျးမရှိပါဆိုတာနဲ့
ခုဖွဈစဉျမှာ ပါဝငျ ကြုးလှနျတဲ့ စဈတပျ ရဲတပျ ပါတီအဖှဲ့စညျး လူပုဂ်ဂိုလျတှကေိုတော့မူ ဥပဒအေရ အရေးယူရှငျးလငျးရေးနဲ့ အမွဈပွတျသုတျသငျရေးကိုတော့မူ စဈပှဲအဆုံးဖွတျ ခံယူပွီး သူသကေိုယျရှငျ နှဲကွပွီးမှ နိဂုံး အဆုံးသတျကွရလိမျ့မညျ ဖွဈကွောငျး အသိပေးရငျး အရေးတျောပုံအောငျဖို့ ခှေးစဈတပျကို အမွဈဖွတျစို့ဟု !!
မအလ အဆင့်အနေထားက ကြိုးစင်နော် ရှောင်လွှဲလို့မရတော့ဘူး ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှလည်း ကြေအေး ညှိနှိုင်းလို့မရတော့ဘူး ဂိတ်ဆုံးနေပြီ
ဒီတော့ ယခုလို‌တွေဖြစ်နေလို့များ မအလ မအုပ်ချုပ်နိုင်ရင် မလုပ်နိုင်ရင် ဆင်းတော့ သွားတော့ ဘာညာနဲ့ လုပ်မရဘူး
အကြောင်းက သူဆင်းရင် သူသေမှာ (သေဒဏ်) ဒီတော့ အဆင်းကိုမခံသလို ဘယ်တော့မှ နေရာဖယ်ပေးမှာမဟုတ်တော့ဘူး အကယ်၍ ဆင်းခဲ့လည်း အဲ့နေ့ပြေးတဲ့နေ့ပဲ စစ်တပ်ကို အခြားသူထဲ ထိုးထည့်ပြီး ဆက်လျက် အာဏာယူထားကြအုံးမှာ ဒါမှ သူပြေးလို့ရပြီး အဖမ်းမခံ မသေမှာ
ဒီတော့ စစ်တပ်မှာ မအလမရှိလည်း ဘာမှဖြစ်မသွားဘူး သူက သေဒဏ်ကျခံနေရတဲ့သူ အမှုပေါင်း သိန်းချီနဲ့ လည်ပင်းကြိုးကွင်းစွပ်ခံနေရသူ ဒီတော့ သိထားရမှာက ခုမအလနဲ့ စစ်တပ်တတပ်လုံးကို အမြစ်ပြတ် ရှင်းလင်းနိုင်မှ အရေးတော်ပုံက အောင်မြင်မှာ‌ဆိုတော့
ပြည်သူ့ရန်သူသည် စစ်တပ်ဖြစ်သည် စစ်တပ်မှ အာဏာလု အာဏာရူး ဗိုလ်ချုပိတွေဖြစ်သည် ဒီတော့ စစ်တပ်မှာ မအလမရှိလည်း ဆက်လျက် တွန်းလှန် တိုက်ပွဲဝင်ပြီး စစ်တပ်ကို အမြစ်ပြတ်ရှင်းလင်းရေးနဲ့ အသစ်ပြန်ဖွဲ့စည်းမှ ရမည်
အကယ်၍ မအလ ဆင်း၍ သို့ သေ၍ ကျန်စစ်တပ်က ဗိုလ်ချုပ်တွေ လက်နက်ချပြီး ‌အပြစ်ဝန်ခံ တာဝန်ခံမယ်ဆိုပြီး အာဏာပြန်အပ်ရင်တော့ ဥပဒေအရလုပ်ဆောင်ပြီး စစ်တပ်ကိုတန်းလျားပို့ အသစ်ပြန်ဖွဲ့စည်းပြီး အစိုးရအောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်
ထိုသို့မှ မဟုတ်ပဲ ပေခံပြီး အာဏာဆက်လု စစ်ရေးနဲ့ ခံချ မထူးဇာတ်ခင်း ထွက်ပေါက်ရှာမည်ဆိုရင်တော့လည်း ပြည်သူဟာ D Day မှ အပ အခြား ရွေးစရာ လမ်းမရှိပါဆိုတာနဲ့
ခုဖြစ်စဉ်မှာ ပါဝင် ကျုးလွန်တဲ့ စစ်တပ် ရဲတပ် ပါတီအဖွဲ့စည်း လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့မူ ဥပဒေအရ အရေးယူရှင်းလင်းရေးနဲ့ အမြစ်ပြတ်သုတ်သင်ရေးကိုတော့မူ စစ်ပွဲအဆုံးဖြတ် ခံယူပြီး သူသေကိုယ်ရှင် နွှဲကြပြီးမှ နိဂုံး အဆုံးသတ်ကြရလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးရင်း အရေးတော်ပုံအောင်ဖို့ ခွေးစစ်တပ်ကို အမြစ်ဖြတ်စို့ဟု !!
ငလငျြလှုပျခွငျးနှငျ့ မငျးအောငျလှိုငျ၏ ကံကွမ်မာ
စဈကောငျစီတပျတိုကျလယောဉျမှူး ၁၀ ဦး ပါကစ်စတနျမှာ တိုကျလယောဉျမောငျးသငျတနျးတကျနေ